Nge-Okthobha i-28 Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-Okthobha i-28 Zodiac yi-Scorpio-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Nge-Okthobha i-28 Zodiac yi-Scorpio-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac ka-Okthobha u-28 yi-Scorpio.
Uphawu lweenkwenkwezi: iScorpio. Le yi uphawu lweZodiac yeScorpio Kubantu abazalwe nge-23 ka-Okthobha-nge-21 ka-Novemba. Umele ubume obunomdla kunye nemvakalelo yemfihlakalo ejikeleze aba bantu.
Inkqubo ye- Iqela leScorpius Ngenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini zeenkwenkwezi, kunye neyona nkwenkwezi eqaqambileyo yiAntares. Ilele phakathi kweLibra ukuya eNtshona kunye neSagittarius ukuya eMpuma, egubungela ummandla weedigri ezikwere ezingama-497 kuphela phakathi kwezibanzi ezibonakalayo ze-40 ° kunye -90 °.
Igama iScorpio livela kwigama lesiLatin elithi iScorpion kwaye libizwa njalo eGrisi naseFrance, ngelixa eSpain uphawu lwango-Okthobha u-28 uphawu lwe-zodiac lubizwa ngokuba yi-Escorpion.
Uphawu olwahlukileyo: Taurus. Kwi-astrology, le miqondiso ibekwe malunga nesangqa se-zodiac okanye ivili kwaye kwimeko yeScorpio ibonakalisa ukonwaba kunye nokutyhilwa.
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Oku kubonisa ubushushu beentliziyo zabantu abazelwe ngo-Okthobha u-28 kwaye baluphawu loncedo kunye nolwazelelo.
Indlu elawulayo: Indlu yesibhozo . Oku kubekwa kwindlu kufanekisela izinto eziphathekayo ezonwabisayo zobomi ezifihliweyo kunye notshintsho lokugqibela lokufa. Oku kuthetha lukhulu malunga nomdla weScorpios kunye neembono zabo zobomi.
Umzimba olawulayo: UPluto . Olu dibana lucebisa ukuzimela kunye nomonde. Igama likaPluto livela kuthixo wamaRoma welizwe langaphantsi. UPluto ukwamele izinto ezigabadeleyo zeli lizwe.
Isiqalelo: Amanzi . Le yeyona nto inomtsalane, abo bazalwe ngo-Okthobha u-28 abathembekileyo kwaye bakufumanisa kulula ukutyhila indlela abavakalelwa ngayo. Ubunzulu bamanzi butyhila ubunzulu baba bantu bantsonkothileyo.
Usuku lwethamsanqa: uLwesibini . Umthetho olawulwa nguMars ngalo mhla ubonakalisa ukuchaneka kunye neshishini kwaye kubonakala ngathi unokuhamba ngendlela efanayo nobomi beScorpio.
Amanani anethamsanqa: 3, 5, 11, 13, 25.
Ulwazi oluthe kratya ngo-Okthobha i-28 Zodiac engezantsi ▼
Iimpawu eziphambili zoMqondiso wamanzi we-Chinese ox Zodiac
IJupiter eGemini: Uyichaphazela njani iNhlanhla kunye noBuntu bakho
indoda yenkuku kunye nenamba yomfazi
Indoda i-pisces ubudlelwane bobasetyhini
uyifumana njani indoda yanamhlanje ibuye inomdla
Ilanga kwinyanga yomhlaza kwi-libra
loluphi uphawu ngoFebruwari 1
Ngaba umfazi wesagittarius uza kubuya